कोशी टप्पुमा दुर्लभ चरा ‘सेतो पेटे रानी चरी’ फेला
धरान, माघ १७–चराको स्वर्गभूमि मानिएको सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा नयाँ चरा फेला परेको छ । सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीमा फैलिएको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा मात्रै ५ सय २६ प्रजातिका चरा पाइने रेकर्ड छ । पछिल्लो समय आरक्षमा ‘सेतो पेटे रानी चरी’ नामक प्रजातिको चरा फेला परेको हो । विश्वमै दुर्लभ मानिने उक्त चरा नेपालको कोशी टप्पुमा फेला परेको कोशी टप्पु बर्ड वाचिङ क्याम्पका सञ्चालक कुरवान मन्सुरीले जानकारी दिए ।
नेपाली नाम ‘सेतो पेटे रानी चरी’ र अङ्ग्रेजी नाम ‘एसी मेनीभेट’ रहेको चरा विज्ञ डा. हेमसागर बरालले जानकारी दिए । ‘नयाँ प्रजाति’ भनेर प्रचार गरिए पनि उक्त चरा सन् २०११ नोभेम्बर १९ मा चरा विज्ञ बद्री चौधरीलगायतले रेकर्ड गरेका थिए । भारतबाट आएको रैथाने सो चरा दुर्लभभन्दा पनि कम देखिने चरामा पर्ने चराविज्ञ डा. बरालले बताए । त्यसबेला दुई प्रजाति ‘एसी मेनिभेट’ र ‘सुइनोज मेनिभेट’ प्रजाति रेकर्ड भएका थिए । त्यसपछि हालसम्म फेला परेको थिएन ।
रेकर्डमा आए पनि यस चराको तस्वीर भने पहिलोपटक फोटोग्राफर सञ्जय था श्रेष्ठले खिचेका थिए । यस चराको विषयमा डा. बरालले सन् २०१६ मा लेखेको ‘बर्ड अफ सप्तकोशी’ पुस्तकमा समेत उल्लेख छ । कोशी टप्पु वर्ड वाचिङ क्याम्पका सञ्चालक तथा फोटोग्राफर सञ्जय था श्रेष्ठले ९ माघमा चरा देखेर तस्वीर खिचेका थिए । चरा नयाँ प्रजातिजस्तो लागेपछि उनले प्रमाणीकरणका लागि चराविद् डा बरालसमक्ष पुर्याका थिए ।
पछिल्लो समय था श्रेष्ठ र झापाका देवेन खरेलले तस्वीर खिचेको डा. बरालले बताए । नेपालमा भएका ८ सय ८६ प्रजाति चरामा पेटे चरा उल्लेख छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग र डीसीएन संस्थाले निकालेको चेकलिस्ट र बरालले नै २०१६ मा लेखेको बर्ड अफ सप्तकोशी भन्ने पुस्तकमा समेत उल्लेख छ । रेकर्ड पहिले नै भए पनि चराको तस्वीर भने कोशीटप्पुमा पहिलोपटक खिचिएको बरालले जानकारी दिए ।
आरक्षणमा चीन, रसिया, पाकिस्तान, बंगदेश, भारत, भुटानबाट कोशीटप्पुमा चरा आउने गर्छन् । चखेवा, कराङकुरुङ रसियाबाट आएका हुन् । यी चरा विश्वमा धेरै लामो दूरीसम्म उड्नसक्ने पक्षीका रूपमा चिनिन्छन् । नेपालमा पाइने जम्मा ८८६ प्रजातिमध्ये ५९ प्रतिशत चरा कोशीटप्पुमा पाइन्छ । रासस
सुन्तला बेचेर २३ लाख रूपैयाँ आम्दानी